मलाई माया गर्ने सबैलाई ‘आई लव यु ! : नायिका सन्चिता (अन्तर्वार्ता ) – Saurahaonline.com
मलाई माया गर्ने सबैलाई ‘आई लव यु ! : नायिका सन्चिता (अन्तर्वार्ता )
सौराहा अनलाइन | २०७६, ८ मंसिर आईतवार
काठमाडौँ : छोटो समयमै कलाकारिता क्षेत्रमा जम्न सफल मोड्ल तथा नायिका मध्येकी एक हुन सन्चिता शाही । म्युजिक भिडियोबाट अभिनय थालेकी सन्चिता छोटो समयमै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेकी छन। भावुक गीतमा अभिनय गर्न रुचाउने उनी बास्तबिक जीवन भने त्यस्तो नभएको बताउँछिन। दैलेखमा जन्मिएर कलाकारितामा होमिएकी सन्चिता यस क्षेत्रमा आफुले सक्दो योगदान दिने बताउँछिन। पछिल्लो समय ‘प्रेमवाणी ‘ चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त नायिका सन्चिता शाही सँग मिलन दाहालले गर्नुभएको कुराकानिकाको सारांश :
गीतको म्युजिक भिडियो साथै मेरो दोस्रो चलचित्र ‘प्रेमवाणी ‘ को छायांकनमा व्यस्त छु।
कलाकारीता क्षेत्रमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
मोड्लिङमा सकृय भएको लगभग दुइ वर्ष जति भयो।
मोड्लिङ क्षेत्रमा नै किन लाग्नुभयो ?
म मोड्ल नै बन्छु भनेर आएको त थिँईन ।तर ,काम गर्दै जाँदा यहि क्षेत्रमा रमाउन थालेँ र सबैको साथ् सहयोग पाँए । सबैले यहि बाटो देखाइदिनु भयो ,मैले पनि धेरै मेहनत गरेँ। त्यै अनुसार सफल पनि भएजस्तो लाग्छ, तर धेरै गर्न बाँकी छ। मलाई सानोमा भने डाक्टर डक्टर बन्ने सोच थियो , बिस्तारै मन बदलियो र यस क्षेत्रमा नै रमाईरहेको छु ।
अहिले कलाकारिता क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मोड्लिङको अबस्थालाई हेर्दा जति सहज देखिन्छ त्यति सजिलो छैन । सबैले सजिलै एक्टिङ गर्न सक्दैनन् ,यो आफैमा गार्हो काम हो ,अर्को कुरा पछिल्लो समय सोख पुरा गर्नको लागि आउने गर्दछन् र यस्ता मोड्ल मोड्लिङ क्षेत्रमा धेरै टिक्दैनन् । राम्रो गर्न सके नाम पनि कमाइन्छ, दाम पनि कमाइन्छ । तर सोचे जति सहज भने छैन् ।
यस क्षेत्रमा आँउदा परिवारको साथ कस्तो पाउनुभयो ?
मलाई परिवारको पुरा साथ छ। घरबाट आफुलाई ईच्छा लागेको क्षेत्रमा मेहनत गर, सफल बन हामि साथ दिन्छौँ, भन्नुहुन्थो। काठमाडौँमा आएर यस क्षेत्रमा जम्नु त्यस्तो सजिलो पनि थिएन । मलाई यस क्षेत्रमा स्थपित गराउन मौसम गुरुङ, केशव घिमिरे,ओम दाई लगायतको धेरै साथ र सहयोग रहेको छ । उहाँहरुकै कारण आज म यस क्षेत्रमा स्थापित हुन् सकेको छु ।
यो क्षेत्रलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो छ भनिंदैन नि ? के भन्नुहुन्छ ?
मलाई यहि ‍कुरा अचम्म लाग्छ किनभने कलाकारहरुले नै मान्छे सारा संसारको पिडा गित संगीतबाट हटाइरहेका हुन्छन् । मानिसलाई कुनै दुख पिडा पर्दा मानिसहरुले गीत संगीत नै सुन्ने गर्छन ,भिडियो हेरिरहेका हुन्छन तर पनि मानिसहरुको सोचाइ कलाकारहरुलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन भएको देखिंँदैन । खै किन परिवर्तन आउदैन ? त्यसको उत्तर म दिन सक्दिँन । मान्छेले जहाँ काम गर्दा पनि दुख गर्नु पर्छ कसैसंग सहयोग माग्नु पर्छ । मलाई त्यसले फरक पनि पर्दैन् किनभने मलाई मेरो परिवारको सर्पोट र म आफैमा पनि निर्भर छु, त्यसैले मलाई अरुको हेराइ र सोचाइले फरक पार्दैन् ।
तपाई भावुक गीतमा मात्रै धरै देखिनुहुन्छ के हो यसको राज ?
त्यस्तो होइन ,एउटा कलाकार भइसकेपछि सवै विधामा पोख्त हुनुपर्छ भावुक बाहेकका गीतमा पनि अभिनय गरेको छु। तर धेरै यस्ता गीतमा अभिनय गरेको चाँही हो, त्यसैले त्यस्तो देखिएको होला।
यति राम्री हुनुहुन्छ , प्रेम प्रस्ताब चाँही कत्तिको आउँछन नि ?
(हाँस्दै )एउटा केटि मान्छेलाई प्रस्ताब नै आउँदैनन त् भन्न मिल्दैन। कसैले सकरात्मक रुपमा त् कसैले नकारात्मक रूपबाट प्रस्ताब राख्छन् । यस्ता प्रस्ताव आउने कुरा सामान्य जस्तो भैसक्यो ,खासै ध्यान दिन पनि सकिँदैन। मेरा गीतहरुलाई हेरीदिने र मलाई स्थापित बनाउने भगवान जस्ता सबै दर्शक जसले मलाई कलाकारको रुपमा माया गर्नुहुन्छ सबैलाई ‘आई ल यु भन्न चाहन्छु।
कलाकार बन्छु भन्ने र यसैमा भविष्य बनाउन चाहनेहरुलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
आफुमा कला र आफ्नो क्षमता लिएर आउनुहोस् ,आफु दक्ष भएर मात्र आउनुहोस । कसैले भिडियो खेलाईदिन्छु मोड्ल बनाईदिन्छु भनेको भरमा यो क्षेत्रमा नलाग्नुहोस भन्छु । मुख्य कुरा आफुमा सक्छु भन्ने आत्मबिश्वास छ र काम गर्न सक्छु , कलाकारितामा केही गर्ने खुबी छ भन्ने लाग्छ भनेमात्र यो क्षेत्रमा आउनुहोस भन्न चाहन्छु । कसैले हेप्न नसक्ने कसैको अगाडि झुक्नु नपर्ने गरि कलाकारितालाई समाजमा चिनाउने दृढ संकल्प लिएर आउनुहोस भन्न चाहन्छु।